I-Tour yeBholeji yaseBabson - 22 Iifoto zeCampus
Thatha iNtambo yeThoto kwi-Babson College Campus
Tomasso Hall kwiKholeji yaseBabson
Tomasso Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
Eyasungulwa ngo-1919, iKholeji yaseBabson yikholeji yabucala yabucala eWellesley, eMassachusetts. IWellesley College kunye neKholeji yaseOlin bayasondela , kwaye abafundi baya kufumana iikholeji zeminyaka engaphezu kwe- 30 e-Boston .
UBabson unomzimba wabafundi malunga nama-3 000 nabafundi abaphumeleleyo nabafundi be-graduate. Le kholeji inqobile amanqaku amaninzi kwiiprogram zemfundo zentsebenzo kunye nezandla, kubandakanywa nekhosi yabafundi abatsha apho baqulunqa khona, baqalise kwaye bahlalutye ishishini labo. Impumelelo yeBabson ngeenkqubo zoshishino zenze enye yezona zikolo ezilungileyo kakhulu kwezoshishino.
I-Tomasso IHolo yenye yezona zakhiwo ezibonakalayo kwi-campus. Iphethe iiofisi zecandelo kunye neeklasi, kwaye zihlala ezinye zeenkqubo eziphezulu zeBabson. Apha, abafundi banokuthatha inxaxheba kwikhosi yokuqala yenkalo Imfundo yoLawulo kunye noSomashishini kunye neCocaching for Leadership kunye neNkqubo yeQela.
I-Hall Hall kunye neLundergraduate Admission Centre
Isiko sokwamkelwa kweLunder kwiBholeji yaseBabson. Allen Grove
Enye yeendawo zokuqala abantu abaninzi abavakatye kwi-Babson campus nguWardard Hall. Ihlala kwiziko le-Lunder Graduate Admission Centre, apho abafundi abanokukwazi ukuthetha nabantu abasebenza kwi-campus kuquka nabeluleki bokungena, babhalisele ukutyelela, okanye bafumana ulwazi olungakumbi malunga nekholeji. Iindwendwe nazo zinokuthatha inxaxheba kwiseseshoni yolwazi lokumkelwa kwabafundi besikolo sokufunda ukufunda nantoni na efuna ukwazi ngeKholeji yaseBabson.
Ukwamkelwa kwiKholeji yaseBabson kukukhetha njengoko ungayibona nale grafu yeDPA, iSAT kunye ne-ACT .
IWebster Centre kwiKholeji yaseBabson
IWebster Centre kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Webster Centre igcwele indawo yezemidlalo kunye nemisebenzi yabafundi. Yindlu ye-Morse Swimming Centre, i-Lunder Fitness Centre, iPepsiCo Pavilion, i-Chandor Dance Studio, kunye ne-650-seat Staake Gymnasium. Kwakhona neenkundla ze-racquetball, iinkundla ze-squash, umkhondo wangaphakathi, kunye nekamelo lokunciphisa i-varsity. I-Morse Swimming Centre isetyenziselwa ngabafundi beBabson kunye neqela labafazi kunye nabasetyhini lokubhukuda kunye ne-dive, kwaye iqukethe amabhodi amabhodi adiza kunye nebhodi lebhodi yekhompyutha.
UVan Winkle Hall eYunivesithi yaseAlfred
UVan Winkle Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
UVan Winkle Hall yindlu yokuhlala esekelwe kwimimandla yezemidlalo yeBabson. Inendawo yokuhlala jikelele kuyo yonke iminyaka yeklasi kunye nomdla wentsapho ekhethekileyo, kuquka ne-Healthy Living Tower, Tower Tower, kunye nabesifazane ababuyiselwayo. I-Van Winkle Hall inomoya, kwaye ineendawo zokuhlamba impahla, iikiti eliqhelekileyo kunye nemishini yokuthengisa. Abafundi kule holo bahlala kumagumbi angabodwa okanye aphindwe kabini.
Babson Globe. Allen Grove
I-Babson Globe ayiyiyo kuphela ingqwalasela-yokubamba ingcamango ye-campus yobugcisa, yinto enye eyona nto inkulu kakhulu yokumalala emhlabeni jikelele. Ihlabathi liye lazinikezelwa ngo-1955 waza wahlaziywa waza wabuyiselwa kwakhona ngo-1993. Uluhlu olukhulu luyilinganisa ubude beenyawo ezingama-28 kwaye lukhulu ubukhulu beetoni ezingama-25, kwaye kwaye kwaba nako ukujikeleza kwi-axis. Uyakwazi ukubona iBabson Globe ngokutyelela ngokuzenzekelayo ngexesha lokukhanya kwemini.
I-Arthur M. Blank Centre kwiKholeji yaseBabson
I-Arthur M. Blank Centre kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Arthur M. Blank Centre ye-Entrepreneurship yazinikezelwa ngo-1998, kwaye inika indawo kwiinkqubo ezininzi ze-Babson kunye namaziko. Kwiziko elingenanto, abafundi banokufumana iifisi kunye nendawo yokuphanda, kunye nekomkhulu lemibutho yabantwana emininzi. Iziko liphethe iNkomfa yoPhando lwezoBanini beBhoksi yaseBabson, iNkcazo yoShishino loShishino lwaMazwe onke, iZiko loBuNkokheli boLimo boBuchule boTyhini, kunye nokunye.
I-Donald W. Reynolds I-Campus Centre kwiKholeji yaseBabson
I-Donald W. Reynolds I-Campus Centre kwi-College yaseBabson. Allen Grove
I-Donald W. Reynolds Campus Centre inikezela abafundi baseBabson ngeenkonzo ezahlukeneyo. Ukongeza kwi-bookstore, isikhungo se-campus sineCafé, i-ATM, Igumbi loLwazi, igumbi leposi, kunye neekhiye zokuhamba kwabafundi. Kwakhona iofisi ezibalulekileyo, kubandakanywa ne-Ofisi yokuXhobisa, i-Canon Satellite Office, kunye nee-Ofisi zeMicimbi yabafundi. Ukuzonwabisa, isikhungo sinikeza indawo yeentlanganiso, iinqwelo zethengisi, ii-lounges, igumbi lomdlalo kunye ne-Dunkin 'Donuts.
Igumbi leNcwadi yaseBabson
I-Bookstore kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
Igumbi leNcwadi yeBathole yaseBabson itholakala kwiziko leReynolds Campus, kwaye linezinto ezininzi ezifunwa ngabafundi beekholeji. Abafundi bangazithenga okanye baqeshise iincwadi zezifundo baze bathengise kwakhona ekupheleni kwe-semester kunye nenkqubo yokubuyisela incwadi yokufunda. I-bookstore ibuye ithengise iimpahla zesikolo, iikhomputha kunye ne-electronics, kunye nezohlobiso kunye nezibonelelo zamagumbi okulala. I-bookstore nayo ibonisa isambatho sekholeji, kuquka i-Champion and Special Under Armor.
I-Horn Library kwiBholeji yaseBabson
I-Horn Library kwiBholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Horn Library iyindawo ebalulekileyo kubafundi, kokubili ukufunda nokuphumla. Inika abafundi ithuba lokufikelela kumaziko okufundela, ukutya, kunye neendawo zokufunda. I-Horn Library ibamba iSebe leNkonzo ye-IT kunye neComputer Computer Centre, isikhungo se-Cutler soTyalo-mali kunye ne-Ofisi kaMongameli. Kwakhona iJazzman, ivenkile yekhofi. Ngaphandle kwilayibrari yi-Humphries Plaza, ebonisa umthombo wePlagigi.
I-Field Alumni kwiKholeji yaseBabson
I-Field Alumni kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Alumni Field isiseko sekhaya kwiqela elithandwayo neliphumeleleyo leBabson softball. Insimu yakhiwa ngowe-1987, kodwa ukulungiswa kwakutshanje kwenze indawo yendawo yokudlala eyenza i-NCAA Division III Tournament Reginal Championships kabini. Intsimi ifaka amabini amabini, isilumkiso sesilumkiso seenyawo ezi-8, i-bullpen, kunye nenqwelomoya yokugqibela. Abafaki banokuzonwabisa kunye nokuhlala kweefayili kunye nebhokisi lokushicilela ibali lesibini. I-Babson Softball ikhuphisana kwiCandelo le-NCAA III INkomfa ye-NEWMAC.
UBryant Hall kwiKholeji yaseBabson
UBryant Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Bryant Hall yenye yeehholo zokuhlala ezincinci zeBabson, ezinama-45 abafundi. Itholakala ekungeneni kwesango leNtshona Kholeji. Abafundi baseBryant Hall banokuhlala emagumbini angabodwa kunye namagumbi aphindwe kabini, kwaye amakamelo aphindwe kabini anamanzi okuhlambela ngasese kunye neekhikhini. Isakhiwo sineekhikhini zomphakathi, izixhobo zokuhlamba iimpahla, kunye nommandla wendawo yokuphumla oqhelekileyo kuwo wonke umgangatho. Kukho kwakhona i-hora yama-24 yokuhlala ngokuthula ekhoyo kubafundi baseBryant Hall.
IGerber Hall kwiKholeji yaseBabson
IGerber Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
IHerber Hall iqukethe iiofisi zamagosa kunye neeklasi, kwaye inxalenye yenkqutyana enkulu yezakhiwo ezithatha ezinye zezinto ezifundiswayo zabafundi. Iqhotyoshelwe kwi-Horn Library naseBabson Hall, eneCandelo lokuBhala kunye neZiko loLwazi lweMathematika. IGerber Hall ibizwa ngokuba ngumsunguli weGerber Baby Food, ongomnye wabalumni abadumileyo bakaBabson, kunye nabasunguli be-Quiznos noZumba Fitness.
ICarlos J. Mattos Hall kwiKholeji yaseBabson
ICarlos J. Mattos Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
ICarlos J. Mattos Hall yenye yeehholo zokuhlala ezincinci zeBabson, kunye nabafundi abangama-47 kuphela. I-Mattos Hall yenzelwe ukudala uluntu olwamkela abafundi bokuqala, kwaye i-lounge ye-TV kwisakhiwo esisezantsi isebenzisa iziganeko zentlalo kunye namaqela okufunda. Iholide inamagumbi angatshatanga, aphindwe kabini, anamathathu, kunye nesitayela sokuhlala. UMattos unekhitshi evulekile kubo bonke abahlali.
IHolo yeHlathi kwiKholeji yaseBabson
IHolo yeHlathi kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
Uninzi lwabafundi abaneminyaka yokuqala bahlala kwiHolo yeHlathi, kwii-single, eziphindwe kabini, ezintathu, okanye i-quad-style rooms. Kubafundi abaxubene kwiinkqubo zoshishino zaseBabson, iHolo yeHlathi ineCandelo loLimo lokuShishino oluPhila kunye noHlelo lweNtlalo yoLuntu. Ezi ndawo zokufunda eziphilayo zivulela ithuba kubafundi abatsha baseBabson ukuba baqhelane nekampus kunye nabafundi babo. IHolo yeHlathi ine-lounge ye-TV yokuba abafundi bahlale kuyo.
IHollister Hall kwiKholeji yaseBabson
IHollister Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
Abafundi banokufumana izixhobo ezininzi ezincedo kwiHollister Hall, kubandakanywa Iinkonzo zezeMpilo, iiNkonzo zeMali zezeMali, iZiko lokuFunda, i-Ofisi yeGlavin ye-Multicultural kunye ne-International Education, i-Ofisi ye-Degraduate Dean, kunye ne-Registrar. Umgangatho wokuqala uphaya indlu yeHollister Gallery, apho abaculi bezotyelelo banokubonisa umsebenzi wabo. Abafundi banokubonisa ubugcisa babo kwigalari, ebonisa imiboniso rhoqo.
I-Luksic Hall kwiKholeji yaseBabson
I-Luksic Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Luksic Hall izindlu zamagumbi okufundela kunye neeofisi zezikhundla zezinye zeZabhumi ezihlukeneyo zezemfundo. I-Bigson ethandwa kakhulu kwi-Business Administration, kunye nezohlukeneyo zezemfundo abafundi abazithandayo yi-Entrepreneurship, iMathematika neNzululwazi, ubuChwepheshe, iMisebenzi, kunye noLawulo loLwazi, uLoqosho, iMbali kunye noMbutho, kunye ne-Accounting kunye noMthetho. Iidyuli zeBabson ezigqibeleleyo, ezinikezwa ngeSikolo se-Olin Graduate School, ziquka iinkqubo ze-MBA, iinkqubo ze-MSA, iinkqubo ze-MSEL, kunye nokunye.
KwiiGreek Towers kwiKholeji yaseBabson
KwiiGreek Towers kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
AmaBolson Towers aseGreek, ahlala kwezinye iindlu zokuhlala, anika umdla wokhethekileyo wezindlu kwezinye iikholeji kunye neentlekele. Ezinye zeendawo zaseBritish zaseBritson zihlala ziquka iKappa Kappa Gamma, Chi Omega, kunye neSigma Kappa. I-Greek Towers yinxalenye yeCanfield kunye neKeith Halls, bobabini bendlu abangabafundi abangama-60 abanomdla okhethekileyo kunye nezindlu eziqhelekileyo.
Malloy Hall kwiKholeji yaseBabson
Malloy Hall kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Malloy Hall yenye enye yezakhiwo zezemfundo zeBabson, ii-classroom zokufundela kunye namaziko e-faculty. Ifakwe kwiHolo leMalloy yi-Knight Auditorium, eneenkampu ezininzi zeenkampus. Ukongeza kwii-campus ezahlukeneyo kunye namaqela e-faculty, ama-reunion, ama-homecomings, kunye neminye imisebenzi yekholeji, i-auditorium inamathetheli, amakhonsathi, kunye nezinye izinto ukuba abafundi bajonge. I-Malloy Hall ivela kwi-Webster Centre.
IHolo leMillea kwiKholeji yaseBabson
IHolo leMillea kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
IHolo leMillea liseduze neofisi yeposi kunye neHorickshank Alumni Hall. UMillea ubamba iqela lokuthengisa likaBabson. Ukuthengisa ngenye inxalenye ebalulekileyo yezemfundo kwiBabson, kwaye enye yeenkqubo ezidumileyo. ISebe lezentengiso linikezela ngeeprogram kunye neeprogram, kwaye iqeqesha abafundi kwiintlalontle zoluntu, ukuthengisa, ukuthengiswa komntu kunye nokunye. Abafundi banako ukujoyina i-Babson Marketing Association ukuze zifumane izixhobo ezininzi.
I-Hall yaseOlin kwiKholeji yaseBabson
I-Hall yaseOlin kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Olin Hall yindlu yeenkqubo ezininzi zeBabson. Kwakhona kukho amagumbi okufundela, iinkonzo zabafundi, kunye neziganeko zomcimbi. Isakhiwo sibamba i-Lewis Institute for Social Innovation, iZiko leNtetho, kunye neSool Sol. Abafundi banokufumana ukutya e-Olin Hall e-Pandini, enye yezinto ezininzi zokutya zokudla kweBabson. Iholide inamacandelo amaqela okudibanisa kunye nezinye iindibano zekampus.
IHolo yokuTyela iHolo kwiKholeji yaseBabson
IHolo yokuTyela iHolo kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Hall yokutya yokuHluma iindawo zokudlela eziphambili zeBabson, kwaye ihlinzeka ngeendlela ezihlukeneyo. KwiHolo lokuTyela iHolo yiBabson Market, enika ukutya kwisikhululo se-Global Cuisine kunye ne-MyZone yokutya okungenamsoco. I-Trim ineBistro1919, evulekileyo emva kwe-2: 30 ntambama. IHlm Yokutya iHolo nayo ine-pizza, i-flatbread, kunye ne-order-order order order. Isakhiwo sakha indlu yeSorenson Family Visual Arts Centre.
UGlavin Family Chapel kwiKholeji yaseBabson
UGlavin Family Chapel kwiKholeji yaseBabson. Allen Grove
I-Glavin Family Chapel ibambelela ngezeveki ezithembekileyo ngezenzo zeveki kwaye isebenza njengeendawo zeemfuno ezizodwa. Iqonga lihlala lifumana iindwendwe, iibhonkco, kunye nemitshato ye-campus yoluntu kunye ne-alumni. Ingabamba abantu abayi-150 kwaye inikwe izihlalo, itafile, kunye nepoliti. Inkqubo yomsindo we-Glavin Family Chapel ibandakanya imakrofoni, ipiyano, idiski yomdlali kunye ne-Rodgers 751 Classic Organ.
Unokufunda ngokubanzi ngeKholeji yaseBabson apha: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
Unokuphangela kwakhona ezi zikolo nakwiiprogram zokurhweba kakhulu:
IYunivesithi eBelmont: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
I-University of Clarkson: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
IYunivesithi yaseLehigh: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
IYunivesithi yaseHouston: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
IYunivesithi yaseNortheastern: Iprofayile | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
IYunivesithi yaseMichigan: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
IYunivesithi yaseMaldan: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT i-Admissions Graph
I-Tourist Photo Tour yaseBoston
Quotes kaLeonardo da Vinci
UEva - Umama wabo bonke abaphilayo
Ukuqonda iNkqubo yeMechanical okanye i-Physical Weathering
AmaPagani namaWiccans bazizwa njani malunga nokukhipha isisu?
Ukugweba nokulinganisa i-Springboard Diving
I-Best Best ye-2015 Prom Song Playlist
Iimoto eziseGarage Man Garage
Ngaba i-Islam isekelwe kuxolo, ukuzithoba, nokuzinikezela kuThixo?